Archive du 20180911
Ravalomanana tany Antanifotsy “Ho avy i Dada hiaro ny Malagasy”
Ny vahoakan’Antanifotsy indray no nihaona sy nifampitakosona tamin’i Marc Ravalomanana omaly, ary niara-dalana taminy ny depiote Rakotomanjato Rodin.
Fifidianana 2018 Tandremo ny mpanely tsaho, hoy ny depioten’i Fianarantsoa II
Fifidianana izao no malaza ary saika samy manana ny fanehoan-keviny mikasika izany avokoa ireo hery politika rehetra. Ho an’ny depiote, Manoelina Ratovoson voafidy tao Fianarantsoa II,
Andry Rajoelina Mitohy ny fametavetana firenena
Misy mitady hampihatra ny politikan’ny fandemen-tsaina eto, ka ny mpamotika firenena indray no lazaina fa hanangana.
Rivo Rakotovao Ny Lapan’Ambohitsorohitra no toeram-piasany
Manomboka maka ny toerana maha filohan’ny Repoblika mpisolo toerana azy i Rivo Rakotovao.
Antoko UDECMA « Nanimba anay Rajoelina ! »
Ny kandida natolotry ny antoko politika UDECMA, Norbert Andriamorasata no vahinin’ny fandaharana Mangarahara, handraisan’ny onjampeo Top Radio, raisina eo amin’ny maridrefy 102.8, ireo kandida ho filoham-pirenena isaky ny amin’ny 1 ora tolakandro, omaly.
Gidragidram-pifidianana Hanan-tantara ny daty anio
Anio 11 septambra no fotoana voafaritra fa hamalian’ny Filan-kevi-panjakana na ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana ny fitoriana nataon’ny kandida filoham-pirenena Tabera Randriamanantsoa sy ny Ben’ny tanànan’Ankaraobaoto teo aloha Guy Maxime Ralaiseheno.
AKFM Manohitra ny fitsabahan’ny hery vahiny
Miara-mahatsapa hatrany ny vahoaka malagasy ankehitriny fa, noho ny lafiny ara-stratejika lehibe maneran-tany, dia manamafy ny fitsabahany amin’ny raharahan-tokantranon’i Madagasikara hatrany, ireo hery vahiny samy hafa,
CENI foibe Tonga manatevina ny solontenan’ny kandida
Ny lalàna mifehy ny fifidianana no manome zo ny kandida ofisialy hifaninana amin’ny fifidianana fioham-pirenena, hanana solontena ao amin’ny
Tra-doza tetsy Mahamasina 20 mbola tsaboina ao amin’ny HJRA
Mbola mitana ny sain’ny maro ny loza vokatry ny fibosesehana hiditra ny kianjaben’i Mahamasina hijery ny lalao nifanandrinan’ny Barean’i Madagasikara sy ny Lion du Teranga Senegaley ny alahady 9 septambra teo,
Mpanakanto niray tamin’ny olon-tiany Very ny solosaina, niparitaka ny rakitsary
Tsy mety fay ! Izay no azo hamintinana azy. Efa niaraha-nahita ny nahazo ny solombavambahoaka iray sy ny nahazo ny lehiben’ny faritra iray saingy dia mbola izao tsy malina izao hatrany koa ny sasany amin’ireo mpanakanto.
Hery Rajaonarimampianina Manan-jo hijanona enim-bolana ao Iavoloha
Ny fametraham-pialany no vita fa izy tsy voatery handao ny lapa, izay sady toeram-ponenany miaraka amin’ny vava.
Ambohipo Trano sy moto ary fiara rotiky ny afo
Toy ireny filma apôkalipsa ireny no nitranga teny amin’ny Cité Ambohipo -Boriborintany faha-2 Antananarivo ny misasakalin’ny alahady 9 septambra. Trano hazo nirehitra no nahamay fiara sy moto teny an-toerana tamin’io fotoana io.
Mpamonjy voina Tsaralalàna Nahazo fitaovana tamin’ny ONG Manda Life
Boky maromaro hoentina hanovozana sy hanatevenana ny fahalalan’ireo mpamonjy voina sy fitaovana maromaro, ahitana fanafody sy fitaovana ilaina amin’ny famonjena voina,
Mpilalaon’ny Barea Naneho fiaraha-miory tamin’ny fianakavian’ny maty
« Izahay Mpilalao Barea dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana niharam-boina ary mirary fahasalamana haingana ho an’ireo naratra ».
Savorovoro teny Mahamasina Nanaiky ny FMF fa nisy lesoka ny fikarakarana
Nanambara ny filohan’ny Federasiona Malagasin’ny baolina kitra (FMF), Andriamiasasoa Doda fa izay tokony ho zakan’ny kianjaben’i Mahamasina ihany ny tapakila natonta tamin’iny fifaninanana baolina kitra nifanandrinan’ny Barean’i Madagasikara sy ny Liona sonegaley tamin’ny alahady farany teo iny.
Edito Manimba saina
Vaovao anisan’ny nanamarika ny herinandro ny tranga tetsy Mahamasina hatreto.
Fitaterana eto Antananarivo Mikorontana tanteraka
Nametra-pialana omaly ny filoha lefitry ny fivondronan’ny zotra eto an-drenivohitra UCTU, Atoa Jean Louis Emile Rakotonirina. Raha tsiahivina,
Taksiben’Antananarivo Ny mpanjifa no mizaka ny zava-drehetra
Maro ny taksibe efa nampiakatra avy hatrany ny saran-dalana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina, ny fotoana no nisy fahasamihafany satria teo ireo nanao izany avy hatrany tamin’ny faramparan’ny volana aogositra fa teo kosa ireo niandry ny voalohan’ny volana septambra vao niroso tamin’ilay saran-dalana 500 ariary.
BEPC Antananarivo Nanomboka ny famindrana anaty solosaina ny naoty
Tanterahina etsy amin’ny CEG Antanimbarinandriana nanomboka omaly ny famindrana anaty solosaina ny naotin’ireo mpiadina tamin’ny fanadinana BEPC notanterahina ny 3 ka hatramin’ny 6 septambra lasa teo.
Finafihana mitam-basy Voasambotra ilay jiolahy mpamerin-keloka
Nifamaliana ny tifi-basy tao amin’ny zanabohitra Tanambao Fokontany Ambohimasina, Kaominina ambonivohitra Ambatondrazaka omaly.
TAVOAHANGY FENO MALOTO
Nivalan-drano tao anaty tavoahangy ny lehilahy an’arivony nandritry ny ady baolina kitra izay notontosaina tetsy Mahamasina ny alahady teo.
Hifarana rahampitso ny fe-potoana ahafahan’ireo mitetika ho kandida ho filoham-pirenena mametraka ny dosie maha kandida azy ireo. Hatreto moa dia miisa 15 no efa nametraka izany.
Mitaraina ny vahoaka Aza korontanina izahay
Na tsy mba manana sehatra firy hitenenana aza ny olon-tsotra sy ny olom-pirenena, dia mazava fa leo korontana. Maniry ny hirosoana amin’ny fifidianana, saingy mila araka ny lalàna sy ny rariny ary ny hitsiny izany.
Ambatondrazaka Efa ho lava ny delestazy
Tapaka matetika ny herinaratra ao an-drenivohitry ny Faritra Alaotra Mangoro.
Teknolojia manaraka ny toetrandro Efa miditra mafy i Madagasikara
Ny fandrosoan’ny teknolojia no hitarafana ny fahatanjahan’ny firenena iray. Rehefa mipetraka eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny marika iray dia tsinjo avy hatrany ny fandrosoana misy amin’ny firenena nametraka izany.